June 7, 2021 - Amawpyay
Made in Burma ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ကပစ္စည်းတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ခဲ့ဖူးတယ်
Made in Burma ဆိုပြီး မြန်မာပြည်ကပစ္စည်းတွေ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ခဲ့ဖူးတယ် တချိန်က မြန်မာပြည်မှာ ဒီဇွန်းတွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဦးနေဝင်း လက်ထက်ကစလို့ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး အကုန် ဖျက်စီးခဲ့တယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အနောက်ဥရောပ အထိ Export လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Made in Burma ရေးထားသမျှ ပစ္စည်းနဲ့ စက်ရုံတွေ ပြည်သူပိုင်သိမ်းတော့ Made in India လို့ ပြောင်းရေးပြီး ခိုးပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သစ်သား လေးခွ၊ ကျွဲချိုလေးခွ၊ ါးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ငါးမျှားတံ အစုံ။ ဝါးဖက် ခမောက် ဆေးတံအိုး ကွမ်းသား …
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင်၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား ? မစစ်လား ? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေဖတ်ဖို့
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင်၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား ? မစစ်လား ? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေဖတ်ဖို့ ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေ မင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား? ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲ ကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်း စာနာတတ်တဲ့ စိတ် …
သူဌေး ဖြစ်မည့် မှဲပိုင်ရှင်များအတွက် မှဲ့အဟော…
သူဌေး ဖြစ်မည့် မှဲပိုင်ရှင်များအတွက် မှဲ့အဟော… မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှဲ့ရှိရင် ထင်ရှားကျော်ဇောမယ်၊ ရက်စက်တတ်မယ်။ နဖူးပြင်တဲ့တဲ့မှာ မှဲ့ရှိရင် ငွေကြေးပြည့်စုံတယ်လို့ အထင်ခံရမယ်။ လက်ယာဘက် မျက်ခုံးမွှေးပေါ် မှဲ့ရှိရင် ချမ်းသာမယ်၊ ဥစ္စာပစ္စည်း ပြည့်စုံမယ်၊လောကီချမ်းသာမှု အပြည့်အစုံ ခံစားရမယ် …။ ဝဲဘက်မျက်ခုံးပေါ် မှဲ့ရှိရင် အသောက်အစားများမယ်၊ လောင်းကစားကလည်း တမ်းတမ်းစွဲပါ။ လက်ယာဘက် မျက်ခုံးမွှေးအဆုံးမှာ မှဲ့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းမှာ အကြီးအကဲဖြစ်ပါမယ် …။ လက်ယာဘက်မျက်ခမ်းအောက်မှဲ့ရှိရင် မျက်နှာပွင့်ပြီး လူချစ်လူခင်များမယ်။ ဝဲဘက်မျက်ခမ်းအောက်မှဲ့ရှိရင် လူမုန်းများမယ်၊ အတိုက်အခံနဲ့အမြဲတွေ့ရမယ်၊ ငယ်စဉ်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိူးစုံကြုံတွေ့မယ်။ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ရင် သတ္တိရှိမယ်၊ ဇနီးရဲ့ သြဇာလွမ်းမိုးမှုခံရတတ်တယ် …။ လက်ယာဘက်နှာခေါင်းမှာ မှဲ့ရှိရင် သားသမီးအဖတ်မတင်တာ ဖြစ်မယ်။ နှာခေါင်းတည့်တည့် နှာသီးထိပ်ဖျားမှာမှဲ့ရှိရင် အနုပညာလောကမှာ …
လက် နဲ့ ခြေထောက် တွေ ဖြူဝင်းပြီး နူးညံ့နေစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်း နဲ့ ချေးချွတ်မယ်…
လက် နဲ့ ခြေထောက် တွေ ဖြူဝင်းပြီး နူးညံ့နေစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်း နဲ့ ချေးချွတ်မယ်… လက် နဲ့ ခြေထောက် တွေ ဖြူဝင်းပြီး နူးညံ့နေစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်း နဲ့ ချေးချွတ်မယ် အလှအပ လို့ ဆိုရာမှာ မျက်နှာ လေးကိုသာမက လက်တွေ ခြေထောက် တွေကိုလည်း ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်။ လက်တွေဟာ အရာဝတ္တုတော်တော်များများကို ကိုယ်တွယ် ထိတွေ့နေရလို့ သေချာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ခြေထောက်လေးတွေကိုလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ လက်တွေ ခြေထောက် တွေမှာ နေလောင်လို့ မည်းနေတာတွေကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်း ၁ ပါဝင်ပစ္စည်း နွားနို့ ခွက် ၁/၄ ပုံ ကွေကာအုတ်အမှုန့် …
”ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တနင်္လာလေးတွေနဲ့ ပြန်မပြောနားမထောင်တဲ့ အင်္ဂါလေးတွေ” အကြောင်း…
”ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တနင်္လာလေးတွေနဲ့ ပြန်မပြောနားမထောင်တဲ့ အင်္ဂါလေးတွေ” အကြောင်း… တနင်္လာ သားသမီး အများစုဟာကိုယ်ကလည်း ချစ်သလောက် ကိုယ့် အပေါ်ပြန်အချစ်ခံချင်သူတွေပါပဲနော်… အချစ်ဦးရဲ့ ပုံပြင်ပြောခြင်းကိုလည်းတနင်္လာ သားသမီးတိုင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်… အပြောက ပြတ်သလောက်စိတ်ထားနုတယ်….မိဘအပေါ် / ချစ်သူအပေါ် သိတက်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ နွဲ့ဆိုး ဆိုးတက်ကြတယ်။ ဘယ်လိုနေနေ ချစ်ဖို့ကောင်းတာ တနင်္လာသား သမီးတွေရဲ့ မွေးရာပါ အားနဲချက် အမြဲတမ်းလက်တွေ့ကျကျ ဘယ်အရာမှ ပြီးပြတ်အောင် မလုပ်ပဲ ဟိုတန်းလန်းသည်တန်းလန်း လုပ်တက်ကြတယ်… အစားအစာဆိုလည် အကောင်းမှ ကြိုက်တယ်။ အစားနဲ့ ပါတ်သတ်လာရင် ထိပ်ဆုံးက ပါပြီးသားပဲ။ ပူစရာတွေ ရှာကြံတွေး နေတတ်တယ်တငွေ့ငွေ့နဲ့ရင်ထဲမှာ ကျိတ်ခံစားပြီး မသိမသာလေး ကောက်လိုက်ရမှ မွန္​တယ္​ဆို share သြား …